Niman lagu tuhunsanaa kufsi oo la sii daayey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Elisabeth Massi Fritz, gar-yaqaannadii u doodaysay gabadha dacwadda soo oogtay. sawir: Montage TT
Niman lagu tuhunsanaa kufsi oo la sii daayey
La cusbooneeyay tisdag 19 december 2017 kl 15.52
La daabacay tisdag 19 december 2017 kl 11.24
Saddex nin oo lagu tuhunsanaa in ay si wadajir ah xaafada Fittja ee magaalada Stockholm gabadh ugu kufsadeen ayaa maanta la sii daayey,
go´aankas ayaa dhowaan lagaga dhawaaqey maxkamada Södertörn.
Gabadha la kufsaday ayaa markii uu boliisku wareeystay sheegtay in ay la liidato dhibaatooyin la xidhiidha isticmaalka maandooriyaha islamarkaasna ay xaafadda Fittja ku sugnayd si ay mukhaadaraad uga iibsato qof halkaa jooga.
Markii ay xaafada timid ayuu ka soo hor baxay nin isku sheegay in uu yahay dadka mukhaadaraadka iibiya. Ninkan iyo kuwo kale ayaa dabeetana i kufsaday, waa sida ay gabadhani ku sheegtay wareeysiyadii lala yeeshey.
Hasayeeshe ay maxkamadu maanta gaadhay go´aanka in nimankan oodda laga qaado, sababta ayaa ah inaan dembigan lagu caddeeyn karin nimankan. Saddexda nin ee la sii daayay ayaa dhiibay warbixin ah in ay tabaruc ahaan ku raacday.